လစ်လပ်သွားတဲ့ အဲဗာတန် နည်းပြနေရာ တို့နဲ့ . . . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
လစ်လပ်သွားတဲ့ အဲဗာတန် နည်းပြနေရာ တို့နဲ့ . . . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
အဲဗာတန် အသင်း ဟာ မာဆေး ဆိုက် ဒါဘီ အပြီး မှာတော့ နည်းပြ မာကို ဆေးလ်ဗား ကို ထုတ်ပယ် ပစ်လိုက် ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။ မာကို ဆေးလ်ဗား ဟာ အဲဗာတန် ကို ၁၈ လ သာ ကိုင်တွယ် ခဲ့ရပြီး ယခု ရာသီ မှာတော့ ရလဒ် တွေ အလွန် ဆိုးရွား ခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ မှာတော့ ဂန္ထဝင် ကစား သမား ဟောင်း ဒန်ကန် ဖာဂူဆန် က ယာယီကိုင်တွယ် နေပြီး နည်းပြသစ် ခန့်အပ် ဖို့ ကို အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင် သွားမယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ လည်း အူနိုင်း အမ်မရီ ရဲ့ နေရာ ကို အစားထိုး ဖို့ အတွက် စကာတင် ရွေးချယ် ထား သူတွေ ကို စတင် အင်တာဗျုး ပြုလုပ် နေပြီ လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ လာမယ့် ရာသီ မှာ နည်းပြ ဗယ်ဗာဒီ ကို ထုတ်ပယ် ပြီး နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် နည်းပြ ရော်နယ် ကိုးမင်း နဲ့ အစားထိုး ဖို့ သေချာ နေပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
တိုက်စစ်မှုး ရှာပုံတော် ဖွင့် နေတဲ့ အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် ဟာ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှုးကြီး အိုလီဗာ ဂျီရူး ကိုလည်း စာရင်း ထဲ ထည့်သွင်း ထားတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် အသင်း ဟာ ကိုပါ အီတလီယာ ဖလား ၁၆ သင်း အဆင့် မှာ ကာဂလီယာလီ အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ရမယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ အကယ်၍ ကွာတား ဖိုင်နယ် အဆင့် ကို တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ ပါက ဖီအိုရင် တီးနား ( သို့ ) အတ္တလန်တာ အသင်း တွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ရမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘယ်လ်ဂျီယံ လက်ရွေးစင် အသင်း နည်းပြ မာတီနက် ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရွှေဘောလုံး ဆု ကို လီယွန်နယ် မက်ဆီ ရရှိ သွားခဲ့ တဲ့ အတွက် ၀မ်းမြောက် ကျေနပ် ခဲ့ပြီး ဘောလုံး ကို ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်း မက်ဆီ ကို သဘောကျ နှစ်သက် သင့်တယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လက်စတာ စီးတီး အသင်း ကတော့ နည်းပြ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာ ကို စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ဖို့ စီစဉ် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
၀က်စ်ဟမ်း ၊ အာဆင်နယ် နဲ့ အဲဗာတန် တို့ က စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ နည်းပြ ရာဖေးဘင်နီတက် ရဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်း ကြေး ဟာ ပေါင် သန်း ၂၀ ရှိတယ် လို့ လက်ရှိ ကလပ် ( တရုတ် စူပါလိဂ် ကလပ် ) က ထုတ်ဖော် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် က စိတ်ဝင် စား နေတဲ့ ရိုးမား အသင်း ခေါင်းဆောင် ဖလော်ရန်ဇီ ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ အစီ အစဉ် မရှိ ဘူး လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ စပါး နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးဖို့ အစီအစဉ် မရှိတော့ တဲ့ ကွင်းလယ်လူ အဲရစ်ဆင် ကို ဇန်နဝါရီ မှာ ခေါ်ယူ ဖို့ ကြိုးစား ဖွယ် ရှိနေ ပါတယ် ။
ရီးရဲ တောင်ပံ ကစား သမား အီဒင်ဟာဇက် ၊ နောက်ခံလူ မာဆယ်လို တို့ ဟာ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား မယ့် El Clasico ပွဲကို လွဲချော် ကြမယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တောင်ပံ ကစား သမား ဘေးလ် ကတော့ ပြန်လည် ပါ၀င် လာဖို့ ရှိ နေပါတယ် ။
ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ်တွေ က စိတ်ဝင် စား နေတဲ့ ရက်ဘူး ဆဲလ်ဘတ် တိုက်စစ်မှုးလေး ဟာလန်း ရဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်း ကြေး ဟာ ပေါင် ၁၇ သန်း သာ ရှိ နေတာ ကြောင့် စာချုပ်သစ် အမြန်ချုပ်ဆို ဖို့ ဆဲလ်ဘတ် အသင်း က လုပ်ဆောင် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် ဟာ သူတို့ရဲ့ အားထား ရတဲ့ ဘယ် နောက်ခံလူ လူးကပ် ဒင်း ကို စာချုပ် သစ်ချုပ် ဆို ဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်တာ နည်းပြ ကွန်တီ က တော့ ဇန်နဝါရီ မှာ တိုက်စစ် ကို ပိုမို တောင့်တင်း စေဖို့ အတွက် နာပိုလီ တိုက်စစ်မှုး ဒရိုင်း မာတင် ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင် စား နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။